Tag: mpiasa | Martech Zone
Sabotsy 7 Novambra 2020 Alahady 24 Janoary 2021 Douglas Karr
Robert Half Technology sy The Creative Group dia namoaka fanadihadiana sy sary, Digital Marketing Dissonance, izay 4 amin'ny 10 CIO milaza fa tsy manana ny fanampiana ilaina amin'ny tetikasa marketing dizitaly ny orinasan-dry zareo. Na dia tsy mino aza aho fa marina izany, ny fandinihana avy eo dia mamaky ny sasany amin'ireo angon-drakitra ho lasa siny roa, mpanatanteraka IT ary mpanatanteraka mpamorona. Tsy azoko antoka fa mino aho fa misy karazana fifandraisana misy eo amin'ny maha olona IT na ny maha olona mamorona.
Talata, Aogositra 3, 2010 Sabotsy, Oktobra 18, 2014 Douglas Karr
Valisoa. Tamin'ny asako farany roa, dia taitra foana ireo lehibeko fa tsy niraharaha ny valim-bola aho. Tsy hoe tsy naniry ilay vola aho fa tsy notaomiko. Mbola tsy izany aho. Raha ny tena izy dia fanesoana kely ahy foana io - hoe hiasa mafy kokoa aho raha misy karaoty mihantona eo alohako. Niasa mafy foana aho ary natokana ho an'ny mpampiasa ahy.
Tena niraikitra tamiko ity teny nindramina ity tamin'ny herinandro lasa: Ny tanjon'ny marketing dia ny hahatonga ny fivarotana tsy hihoarana. Ny tanjon'ny marketing dia ny hahafantatra sy hahatakatra tsara ny mpanjifa ka ny vokatra na serivisy dia mifanaraka aminy ary mivarotra ny tenany. Peter Drucker Mihena ny harem-pirenena sy ny isan'ny asa mihamitombo ho an'ny mpivarotra antonony. Isan'andro isika mifanatrika
Zoma Janoary 16, 2009 Alatsinainy, Novambra 4, 2013 Douglas Karr
Tontolo andro - isan'andro - ny mailaka mailaka amiko, mailaka amiko, twitter ahy, mitsidika ahy, miantso ahy ary mandefasa hafatra avy hatrany amiko miaraka amin'ny fanontaniana momba ny sehatra, fahaiza-manao, CSS, fifaninanana, paikady teny lakile, olan'ny mpanjifa, fametrahana ny varotra, paikady marketing, bilaogy, haino aman-jery sosialy, sns. Nahazo fanasana aho hiteny, hanoratra, hanampy, hihaona… tianao ny anaranao. Ny androko dia be atao sy mahavariana. Tsy manam-pahaizana aho fa manana traikefa be dia be ary fantatry ny olona izany.